अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नै आँखाले हेर्छ - Sabal Post
अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नै आँखाले हेर्छ
विश्व राजनीतिमा चासोमा नपरेको नेपाललाई अमेरिकाले दक्षिण एसियामा भूमिका खेल्नसक्ने मुलुकका रूपमा चित्रण गरेको छ। भारत र चीनको बीचमा नेपालको अर्को महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको मुलुक हो अमेरिका। पुरानो विकास साझेदार अमेरिकाले १७ वर्षपछि राजनीतिक स्तरमा नेपालसँग औपचारिक छलफल गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालको रणनीतिक महत्त्व बढेको भनिएको अवस्थामा नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीसँग अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कअन्तर्गतको एपी वान टेलिभिजनकी समा थापाले गरेको कुराकानीको अंश
नेपालमा पहिले पनि नियोग उपप्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी बहन गरिसक्नुभएको छ। अहिले राजदूतको रूपमा आउँदा कस्तो अनुभव भएको छ ?
नेपालमा अमेरिकालाई प्रतिनिधित्व गर्दै काम गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएको छु। काठमाडौं मेरो लागि निकै सम्मानीत छ। पहिले पनि नेपालमा काम गरिसकेकाले नेपाली जनता र सरकारसँग कसरी काम गर्ने र के–कस्ता विषय एवं क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्नेबारे म जानकार छु। मैले सन् २००९ मा नेपाल छोडेको थिएँ। वर्तमान नेपाल र पहिलेको नेपालमा केही परिवर्तन पाउनु भएको छ नेपालले लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाधान मात्र गरेन, राजनीतिक दलहरूको सक्रियता र सहकार्यमा नयाँ संविधान जारी गरेर विकासमा अघि बढेको छ। संविधानअनुसार तीनैतहको निर्वाचनपछि तीनै तहका सरकारहरू विकास र स्थायित्वका लागि काम गरिरहेका छन्। अहिले नेपाल नयाँ चरणमा पुगेको छ। यसलाई उपयोग गर्दै स्थायी शान्ति कायम गर्दै विकासमा जोड दिनुपर्छ। म नेपाल र नेपालीको फ्यान नै हुँ। राजनीति मात्र होइन नेपालको संस्कृति र सम्मानको शैली साँच्चै लोभलाग्दो छ। नेपाली खाना, शिवरात्री, बिस्केट जात्रा, रमणीय स्थान मलाई मन पर्छ। अमेरिका यहाँ राजनीतिक स्थायित्वउन्मुख विकासमा काम गरिरहेको छ। नेपाल र अमेरिका सम्बन्धलाई उचाइमा लैजान म प्रतिबद्ध छु।
अमेरिकाले नेपाललाई सधैं भारतीय आँखाबाट हेर्छ भनिन्छ, यहाँको भूमिका कस्तो रहला ?
त्यो सत्य होइन। म नेपालमा छु यहाँ बसेर नेपाल र अमेरिका जोड्न काम गरिरहेको छु भने अर्को स्थान र आँखाबाट हेर्ने भन्ने नै हुँदैन। ‘जिरो सम गेम’ को आधारमा सबै हुन्छ भन्ने छैन। नेपालमा हाम्रो चासो लोकतन्त्रमा विश्वास र विकासमा सहकार्य हो। नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध औपचारिक रूपमा ७१ वर्षदेखिको हो। तर, त्यस अघिदेखि नै नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध थियो। कुनै मुलुकसँग सम्बन्ध रहँदा र जोडिँदा प्रसंग उठ्नु स्वाभाविक होला तर अमेरिकाले भारतीय आँखाबाट नेपाल हेर्ने भन्ने विषय बुझाइमा निर्भर गर्छ। नेपाल अमेरिका सम्बन्धको छुट्टै पहिचान छ।
सत्र वर्षपछिको हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिकी भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पारेको प्रभाव के हो ?
दुई देशबीचको विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकले नेपाल र अमेरिका सम्बन्धलाई एउटा छुट्टै ट्र्याकमा लगेको छ। सम्बन्धलाई नवीकरण गर्दै सहकार्यका क्षेत्र पहिल्याउने काम पनि गरेको छ। नेपाल र अमेरिका कुन क्षेत्रमा व्यस्त रहने र कुन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो। असल शासन, आपसी चासो, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा छलफल भए। स्थिर, जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक सरकार नै अमेरिकी चाहना हो। अहिले नेपाल नयाँ चरणमा पुगेको छ। यसलाई उपयोग गर्दै स्थायी शान्ति कायम गर्दै विकासमा जोड दिनुपर्छ।
आर्थिक विकास र स्थायित्व नै हाम्रो चाहना हो। नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र समृद्धिमा हामीले जोड दियौं। नेपालले चालिरहेका प्रक्रियाबारे जानकारी गराएको छ। भ्रमणमा भएको खुला छलफलले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लगेको छ।
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनको कारण अमेरिकाले यहाँ स्पेस खोजेको भन्ने अड्कलबाजीबारे के भन्नुहुन्छ ?
कूटनीतिमा शंका, आशंका र अडकलबाजी सधैं हुन्छ। म स्पष्ट पार्छु, सबै मुलुकको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। कुनै मुलुक अर्को मुलुकका लागि स्पेस खोज्दै सम्बन्ध विस्तारमा जाँदैन। तपाईंले सोधेजस्तो ठ्याक्कै होइन। यद्यपि कूटनीतिक सम्बन्ध ‘जिरो सम गेम’ मा मात्र हुँदैन। हामी सहकार्य र आर्थिक विकासमा काम गरिरहेका छौं। त्यो नै हाम्रो स्पेस हो।
भूराजनीतिको कारण अमेरिकी चासो रहेको भनिन्छ। नेपालले चीन, भारत अमेरिकालगायत विषयमा सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको छ त ?
नेपाल यो क्षेत्रमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छ। सम्बन्ध, विकास, व्यापार र पूर्वाधारमा गुणस्तर कायम राखेर सहकार्य गर्न हामीले चाहेका हौं। हामी यसमा काम गरिरहेका पनि छौं। नेपाललाई हामीले आफ्नो दृष्टिबाट हेर्ने हो। कुनै रणनीतिक वा अन्य विषयभन्दा पनि सहकार्यमा जोड दिने हो। एकअर्कामा कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषय नेपाल र सम्बन्धित मुलुकमा भर पर्छ। नेपाल र अमेरिका सम्बन्ध पनि त्यसरी नै अघि बढेको छ। नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो, यसले आफ्ना नागरिकको चाहनाबमोजिम काम गर्नुपर्छ। त्यहीअनुसार काम गरेको अनुभव हामीले पनि गरेका छौं। नेपालले दुई महत्त्वपूर्ण छिमेकीलाई व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक विकासमा उनीहरूको साथ लिनु आवश्यक छ। नेपाल ल्यान्ड लिंक भएर काम गर्न सक्नुपर्ने ठान्छु।
हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री र अमेरिकी विदेशमन्त्रीबीच इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र उत्तर कोरियाको विषयमा छलफल भएको भनिएको छ नि ?
नेपालको विषयमा यहाँ भएको अड्कलबाजी सत्य होइन। हामीले नेपालको विकासका लागि नै लगानी गर्ने हो। अरू कसैलाई हेर्नका लागि होइन। दुईपक्षीय सम्बन्धको आधारमा सहकार्य गर्ने हो। यसमा अन्य मुलुकसँग जोड्ने भन्ने हुँदैन। कतिपय प्रसंगमा अन्य मुलुकको भूमिका खोजिन्छ, त्यो क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि हो। यसमा हामीले नलुकाई कुरा राखेका थियौं। त्यसबारे यसअघि आएको अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिले स्पष्ट पारेकै छ।
भारत र चीनबिना नै नेपाल र अमेरिका सम्बन्ध सम्भव रहेको र त्यो गर्न नेपालले सक्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?
नेपालका दुई सम्मानीत छिमेकी छन्। दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर नेपाल अघि बढेको छ। छिमेकीलाई साथमा राख्नुपर्छ। ल्यान्डलिंक गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ। त्यस्तै, नेपाल र अमेरिकाबीच पनि सहकार्य जारी छ। नेपालको कूटनीति कमजोर छैन।
पहिलेदेखि नै सहयोग गरिरहेको अमेरिकाले नेपालको विकास प्रक्रियालाई कसरी हेर्ने गरेको छ ?
हामीले पछिल्लो समय भूकम्पको बेलामा नेपाललाई गरेको सहयोगलाई पछिल्लो पुस्ताले स्मरण गर्छन्। नेपालमा भूकम्प जाँदा अमेरिकाले गरेको सहयोग र त्यसअघि पनि नेपालले गर्दै आएको सहयोगको विषयमा म स्पष्ट हुन चाहन्छु। नेपालको पूर्वाधार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र होइन शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको छ। शिक्षाले नै नेपालमा विकासको बाटो खोल्छ भन्नेमा अमेरिकाको विश्वास थियो। त्यसैले पिस कोप्र्सदेखि अन्य सहयोगसमेत हुँदै आएको हो। नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने सहमतिअनुरूप काम अघि बढेको छ। यो हाम्रो नेपाली नागरिक र विकासप्रतिको प्रतिबद्धता हो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तिब्बतको विषयमा लिएको निर्णयले यो सम्बन्धमा असर गर्छ कि ?
नेपाललाई त्यसले कुनै असर पार्दैन। नेपालले तिब्बतीलाई सुरक्षित ‘प्यासेज’ दिएको छ। नेपालबाट धर्मशाला जाने प्रवृत्ति पुरानै हो। मानवताको आधारमा नेपालले दिएको त्यो बाटोलाई अमेरिकाले सधैं सम्मान गर्छ। मानव अधिकार र मानवीयतामा अमेरिकाले गर्ने सहयोगमा नेपालको साथले महत्त्व राख्छ।
समावेशी नीति सम्बन्धमा नेपालको अभ्यासबारे के भन्नुहुन्छ रु हाम्रो राष्ट्रप्रमुख नै महिला हुनुहुन्छ भने यसअघि सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पनि महिला नै हुनुहुन्थ्यो। अनि किन यहाँको समावेशीको विषयमा चर्चा हुने गरेको होला ?
यहाँ आएर ओहोदाको प्रमाणपत्र महिला राष्ट्रपतिलाई बुझाउन पाउँदा निकै खुसी लाग्यो। नेपाल लोकतन्त्र समावेशीमा अग्रसर देखिन्छ। यसको पहुँच दूरदराजमा पुग्ने आशा गरेको छु। स्थानीय तहदेखि माथिसम्म महिलाको पहुँचले नेपालको लोकतान्त्रिक छवि उकासिएको छ। यसले नेपालमा बाह्य लगानी आउने सम्भावना देख्छु। नेपालका छिमेकीलाई हेरेर यहाँ लगानी हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ। राजनीतिक स्थायित्व भएकाले नेपालमा लगानी हुनसक्छ। स्थिर, जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक सरकार नै अमेरिकी चाहना हो।
अमेरिकामा नेपालबाट धेरै विद्यार्थी उच्चशिक्षाका लागि गएका छन्,यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
अमेरिकामा गुणस्तरीय शिक्षा भएकाले आकर्षण बढेको हो। नेपालका विद्यार्थी अमेरिकामा गुणस्तरीय शिक्षा लिइरहेका छन्। उनीहरू फर्केर नेपाल आएपछि विकासमा सहयोग गर्नेछन्। अमेरिकामा अध्ययन गरेर फर्किएर विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न भएकाहरू पनि छन्।
अमेरिकामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न गएका नेपालीले ज्यान पनि गुमाएका छन्। त्यहाँ कुनै मुलुकलाई नै ताकेर त्यस प्रकारको हत्या हुने गरेको त छैन ?
त्यहाँ हुने अपराधमा परेर ज्यान गुमाएकोमा दुःख लाग्छ। तर नेपालबाट मात्र होइन अन्य मुलुकबाट गएका र अमेरिकी पनि त्यहाँ रहेका छन्। कुनै मुलुक नै ताकेर त्यस्तो भएजस्तो मलाई लाग्दैन। अपराध सबै मुलुकको चुनौतीको विषय बनेको छ। यसमा हामीले अहिले सुधारका लागि काम गरिरहेका छौं। अमेरिकी सरकार त्यमसा गम्भीर छ।
यहाँले नेपालको सांस्कृतिक स्थान, नागरिक तथा अन्य विषयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार गर्नुहुन्छ। यो तपाईंको रुचिले नै हो कि मन बहलाउन मात्र ?
प्रसारणका लागि सामाजिक सञ्जाल निकै सहज माध्यम हो। जनतासँग सीधा सम्पर्कका लागि यो सजिलो पनि छ। त्यसैले यसमा म भित्रैदेखि हाम्रा गतिविधि पोस्ट गर्छु। कुनै पनि विषय होस् वा नयाँ स्थानबारे तत्काल सामाजिक सञ्जालमा जानकारी गराउँछु। नेपालको त्यस्ता स्थानबारे जानकारी दिन पाउँदा खुसी लाग्छ। यसैले मनदेखि नै पोस्ट गर्ने गर्छु। यसरी राख्दा पक्कै मन पनि जितिन्छ। यो एकप्रकारको जनसम्पर्क विस्तारको माध्यम नै हो।
केही समयअघी अन्नपुर्ण अनलाईनमा प्रकाशीत अन्तर्वार्ता साभार गरीएको
नेपालमा मिडिया स्वतन्त्रताको साथमा छौं : अमेरिकी…